सलमानको जेल सजायले बलिउडमा कसलाई कति क्षति ? कुन कुन प्रोजेक्टमा थिए सलमान ? | Rajmarga
सलमानको जेल सजायले बलिउडमा कसलाई कति क्षति ? कुन कुन प्रोजेक्टमा थिए सलमान ?
काठमाडौं, २२ चैत । भारतको जोधपुर अदालतले कालो हरिण मारेको अभियोगमा बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई दोषी प्रमाणित गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । सलमान जेल चलान भएमा बलिउडलाई करोडौं नोक्सान हुनेछ ।
सन् १९९९ मा फिल्म ‘हम साथ साथ है’को सुटिङका क्रममा कालो हरिण मारेको आरोपमा दोषी सावित गर्दै सजाय सुनाइएको हो । सुपरस्टार सलमानलाई चार सय करोडको प्रोजेक्ट हातमा आएको छ । यदी पाँच वर्षको जेल सजायमा भएमा सलमानले चार सय करोड गुमाउने छन् ।
अहिले सलमान खानको फिल्म ‘रेस ३’ को सुटिङ चलिरहेको छ । सलमानको लिड रोल रहेको यस फिल्मको बजेट १५० करोड रहेको छ । रेस ३ को सुटिङ सकिएको छैन। सलमानलाई जेल सजाय हुने बित्तिकै यो प्रोजेक्ट बीचमै रोकिने र निर्माताको राम्रो रकम फस्नेछ ।
दबंग सिरिजको तेस्रो संस्करण ‘दबंग ३’को सुटिङ चाँडै सुरु हुने तयारीमा थियो । यस फिल्मको दुईवटै सिरिजमा सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हा थिए । र तेस्रोमा पनि सलमान आउनेवाला थिए । यस फिल्मको बजेट करिब १ सय करोड छ ।
फिल्म ट्रेड समिक्षक अमोद मेहरा भन्छन्, ‘रेस ३’को अलावा सलमानको ‘दबंग ३’, ‘किक २’ र ‘भारत’ मध्ये कुनैको पनि सुटिङ सुरु भएको छैन।’ फिल्म सुरु हुनु अघि हुने प्रि–प्रोडक्सनको काम सुरु भइसकेको छ। जसमा कम्तिमा १ सय करोड खर्च भइसकेको छ ।
सलमान खानलाई फिल्मको मात्रै होइन टेलिभिजन रियालिटी शो पनि हात लागेको थियो । उनी करिब १० वर्षपछि फेरि ‘दशका दम’ लिएर आउँदै थिए । यस खेलको प्रोमो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सो शो चाँडै सुरु हुने तरखरमा छ । यसमा सलमान खानले होस्ट गर्ने छन् । अमोद मेहरा भन्छन्, ‘दशका दम–२’ शो का लागि च्यानलले निकै खर्च गरिसकेको छ । सलमानको जेल सजायले उद्योगलाई त क्षति हुने नै छ, साथै सलमानको करियरमा पनि ठूलो क्षति हुन सक्छ ।मिडिया यनपी मा खबर छ ।
Previous post: थाहा पाइराख्नुस्, चट्याङका बेला यस्ता सात कुरामा ध्यान दिँदा बच्न सकिन्छ
Next post: आमाबुबा नपाल्नेलाई नगरपालिकाबाट सेवासुविधा नदिइने
‘बटरफ्लाई’ ट्रेलरमा आर्यनको दुई रुप
शान्तिप्रियको दुरी चलेपछि…
‘हुन्नरी’ बने दीपक, दीपासँग प्रेम र विवाह
निता थापा मगरको ‘बाढुल्की लाग्छ’ सार्वजनिक
दीनाका कारण रोहितको दुख्यो ‘छाती चस्स…चस्स’ (भिडियो)